सम्पादकीय | Nepal First Dalit Online News Portal: www.dalitonline.com | Page 2
प्रमुख पार्टीहरुले मेयरमा निकै कम उम्मेदवारहरु उठाएका छन् । वडा ,सदस्य ,गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा माथि उठेर केही पार्टीहरुले दलित समुदायका असल व्यक्तिहरुलाई मेयर र उपमेयरमा समेत उठाउन सफल भएका छन् । के भन्छन् त , उमेयरका दलित उम्मेदवारहरु ?
सम्पादकीय : हाम्रो बहस किन ?
दलित र शिल्पी शब्दमा कुनै शब्दको पक्ष र विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्नु हाम्रो उदेश्य हुँदै होइन । आन्दोलनमा उठेका सवाललाई बहसको केन्द्र विन्दु र एजेन्डा तयार गर्नु हाम्रो मिसन मात्र हो । यस बहसले हामीमा दलित शब्दमा रहेका गलत र अस्पष्ट बुझाईहरुलाइ स्पष्ट पार्न सहयोग प¥याउनु नै थियो ।
एक वर्षको सकस
दलितका हरेक समाचारलाई हामीले प्राथमिकताको साथ प्रकाशन ग¥यौँ । चाहे त्यो नकारात्मक होस् वा सकारात्मक सन्देश दिने होस् । गल्ती भएको ठाउँमा औँला उठायौँ, दुःखमा परेकाको लागि सहयोग जुटायौँ । अगाडि बढ्न खोज्नेका लागि बाटो देखायौँ, सफलताका पथमा रहेकाहरुको जीवनगाथा देखायौँ । यसले पक्कै पनि समाजमा सकारात्मक असर पा¥यो होला भन्ने आशा राखेका छौँ ।
सम्पादकीय : सरकार ! दलितमाथिको ज्यादती कहिलेसम्म ?
संविधान जारी भएपछि दलित माथि भएका एकपछि अर्को गदै कुटपिट, हत्या धम्की र बर्वरताले सीमा नघग्दा के दलितमाथि न्याय हुन सक्छ त ? के दलित समुदायले खोजेको नयाँ संविधान यही हो त ? जतिवेला सम्म राज्यसँगसँगै राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संघसंगठन र एउटा चेतनशील नागरिकले पनि छुवाछूत र जातीय विभेदलाई आदर्श या कागजमा मात्रै आत्मसात् गर्ने होइन, सोच र व्यवहारमै लागू गर्ने आवश्यक छ ।
पुनर्निर्माणको चुनौती !
विनाशकारी भूकम्प गएको नौ महिनापछि बुधबार रूपान्तरित संसद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । अब सरकारलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि काम गर्न बाटो खुलेको छ । तर, विधेयक पारित हुनुले मात्र समस्याको एकमुष्ठ समाधान हुन सक्दैन ।
आखिर के चाहन्छन् मधेशी नेताहरु ?
नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्ने निहुँमा भारतको सिगो हस्तक्षेप सहने , नेपालीभूमि भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्र तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । यो नेपालभित्रको मधेशी भूमि सिधा भारतलाई सुम्पिने खेल हो । मधेशी नेताहरु भारतको आडमा सिगो देशलाई अघोषित नाकाबन्दी लगाउने र भारतको स्वार्थमा लागेर किमार्थ नेपालभित्र राजनीति गर्न पाउदैनन् ।
भारतसँग हाम्रा नेताहरु किन झुके ?
नेपालमाथि भएको सिगो हस्तक्षेपको विरोधमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले आवाज उठाउँदा नेपालका र्शीष तहका प्रमुख नेताहरु प्रधानमन्त्री कोइराला ,प्रचण्ड र ओली किन बोलेनन् । अघि पछि भारत हाम्रो परम मित्र हो , हाम्रो हितमा भारत हिड्नुपर्छ भन्ने, आफ्ना स्वार्थ अनुकूल भारतसगँ गुहार्न पुग्ने नेताहरु एकहप्तासम्म जनताले पाएको सास्तीमा किन बोल्दैनन् ?
आखिर नेपालबाट के चाहन्छ भारत ?
नाकाबन्दी गराउने भारतको खेल नयाँ होइन । भारतले नेपाललाई घुँडा टेकाउने खेल उतिवेलादेखि नै थियो र अहिले पनि यो नेपाल भारतबीचको नदेखिने शीत युद्ध जारी नै छ ।भारत आखिर नेपालबाट के चाहन्छ ? यो सबै घटनाक्रमलाई पुलुपुलु हेरेर बसेका राजनीतिक दलहरुले भारतसँग टेबुल टक किन गर्न सक्दैनन् ? देखिएर होस् या नदेखिएर नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप वेलावेलामा देखिने गरेको छ ।
दलित अनलाइन किन ?
२०४६ यता नेपाली मिडियाको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । धेरै संख्यामा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन …